प्रकासित मिति : २०७७ भाद्र २६, शुक्रबार ०८:०५ प्रकासित समय : ०८:०५
सत्तारुढ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाको लामो अन्तर संघर्षपसिछ भाद्र २६ गत अर्थात शुक्रबार स्थायी कमिटि बैठक बस्दैछ । यो बीचमा अनेक उत्तर चढाबका बावजुद बिभाजनको सनिकट पुगेको नेकपा बिभाजन हुनबाट रोकिएर असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटिको बैठकको निरन्तरता हंदा थोरै भएपनि लाखौ कम्यूनिष्ट कार्यकर्ताहरु खुसी भएका होलान ।
बुंदा नम्बर १.
नेपालको इतिहासको कालखण्डमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) आज यति ठूलो पार्टी र बलियो पार्टि भएको पहिलो पटक हो । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको दुइतिहाइ नजिको सरकार बनेको पनि यो पहिलो पटक हो । ८ लाख कार्यकता भएको नेपालको अन्य पार्टीहरु भन्दा बढी सदस्य भएको पार्टी पनि यही हो ।
४ जना देशको प्रधानमन्त्री बनीसकेका नेता भएको पार्टी पनि नेकपा मात्रै हो ।नेता नै नेता भएको पार्टी पनि नेकपा नै हो भन्दा फरक नपर्ला । त्याग,तपस्या, र बलिदानी मार्फत क्रान्तिबाट होमिदै आएको पार्टी पनि नेकपालाई मानिन्छ । त्यसले यस्तो पार्टीमा विधिबिहिन, सिदान्तबिहिन, पार्टीको विधानबिहिन ,पार्टीको नीति नियम विपरित हामी कहिले सम्म र कति दिन चल्न सक्छौं ?
अझै प्रष्ट रुपमा भन्ने हो भने व्यात्ति–व्यात्तिको स्वाथउृलाई केन्द्रित गरेर निर्णय गर्न थाल्यौ भने वा व्यात्ति व्यात्ति मात्र मिलेर पार्टीको विधानलाई वास्ता नगरी अगाडी बढ्न थाल्यौ भने कहिलेसम्म नेकपा पार्टी नेपालको ठूलो पार्टि रहन सक्छ ?? त्यसैले आउदै गरेको स्थायी कमिटिको बैठकमा निर्मम रुपमा छलफल गरी पार्टीलाई विधी,पद्धती र विधान अनुसार नियम,कानुन अनुसार चलाउने प्रतिवद्धताका साथ एकमतले निर्णय गरि अघि बढ्न आवश्यक छ । फेरी पनि चोजोमोजो मिलाएर निर्णय गरियो भने तत्काललाई समस्या टरे पनि फेरी समस्या आइ नै हाल्छ । पार्टीको अनुशान आयोगलाई पूर्णरुपमा स्वातन्त्र रुपमा काम गर्न दिने गरी जसले पार्टीको विधि,विधान,मिच्छ उसलाई अनुशासन आयोगले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।
बुंदा नम्बर २. मन्त्रिमण्डल हेरफेर
नेपाली जनताले अपार माया गरेर लगभग दुइतिहाइको सरकार बनाइदिए । ७ प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमामा नेकपा कै सरकार बनाए । यती मात्रै होइन,स्थानीय निकायमा बहुमत कायम गराइदिए । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर संयूक्त रुपमा चुनावमा होमिएर जनताबीचमा प्रतिबद्धता गरेका अथवा सांझा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका कैयौ बिषय बस्तुहरु आज सम्म कति लागु भए ? कति भएनन ? यसको समिक्षा हुन जरुरी छ । नजताका गुनासाहरु तथा सुझावहरु सरकार चलाउने, व्यत्तिहरुले सुन्नु पर्दछ ।
बुंदा नम्बर ३. पार्टीको महाधिवशेन तोकिएकै समयमा गर्नुपर्ने
बुंदा नम्बर ४. राष्ट्रिय सभामा मनोनित बारे
पंतिकारले, यस आलेखमा उल्लेख गर्नु पर्दछ ,किन की वडा सदस्यामा हारेका व्यत्तिलाई पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर पार्टीले ठूलो भुल गरेको छ । ति त्यस्ता व्यत्तिलाई हारेर पनि सांसद बन्नै पर्ने र पार्टीले बनाउनै पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ??? यस प्रश्नको जवाफ खोजीरहेका छन । जनताले हिसाब किताब गरीरहेकै होलान । यस तर्फ पनि नेतृत्वले गंम्भिर ढंगले सोच्नु जरुरी ठान्दछु ।
बुंदा नम्बर ५.कोभिड–१९ ले पारेका प्रभावहरु
विश्व समुदायमा प्रमुख शत्रुका रुपमा आएको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)बाट कसरी न्पाली जनतालाई बचाउन सकिन्छ ? के–के तयारीहरु थप गरेर कम क्षति हुन सक्छ ?यसबारे अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका विभिन्न देशहरुले के कस्तो उपाय अपनाएका छन भन्ने बाट पनि पाठ सिक्नु जरुरी छ । यसबारे समेत नेकपाले स्थायी कमिटि बैठकमा व्यापक छलफल गरेर उचित निर्णय गर्न पार्टी र सरकार चुक्नु हुदैन ।
लेखकः शंकर भण्डारी नेकपा यूवा नेता हुन ।